Ndị na-eme ụdị nile nke ihe na-chọpụtara. Anyị pụrụ ịhụ tiwaputara creativity si ndị mmadụ na-elekọta mmadụ media weebụsaịtị na-gburugburu. Ndị mmadụ na-eji "Vine Videos" na instagram iji gosi ndị ọzọ ha creativity etoju na okwu nke na-agbapụ obere vids na ikenye pụrụ iche photos. Otú obere na a igwefoto nwere ike imere gị ụbọchị ndị a ma ndị a na-adịghị lagging n'azụ na okwu nke akpa ha aghụghọ. Kwa ụbọchị ha na-abịa na ọhụrụ n'usoro nke aghụghọ ose elu osisi vaịn ha. Nwere mmasi na-aga na-omimi banyere ihe ndị a aghụghọ? Isiokwu a ga-akụziri gị 5 nke kasị mma aghụghọ na ndị na-eji ose elu osisi vaịn ha.
The "Aka Free" Usoro:
Ka anyị na-amalite na ihe dị mfe otu maka unu nile. E nweghị ike atọ ebe a na nkà nke anyị na-akpọ agbapụ ndị Aka Free video. Ọ bụ nnọọ dị isi igwefoto ọrụ. All na ị chọrọ bụ gị iPhone. Ịtụnanya ihe bụ na ọ bụ ezie na ngwa ọdịnala dị ka Instagram na Vine achọ ka ị na-emetụ ndị ihuenyo maka ndekọ, ị ka nwere ike ime a video "Aka Free" na ngwaọrụ gị mgbe ikenye vine site na atụmatụ nke assistive aka. Ma nke a abụghị n'ihi na gam akporo ọrụ dị ka mma bụ adịghị n'ihi na android ma.
Na na na, ezuru chit Chat ka-esi na ọrụ. Akpa Gaa na Ntọala nke ekwentị gị, si n'ebe ịnyagharịa General na pịgharịa gaa na accessibility ma lezie ka "Triple Pịa". Ozugbo ị bụ n'ebe ahụ, ịgbanwe ntọala na-akwado Assistive Touch n'ihi na gị "Home" button. Na-azụ otu nzọụkwụ enweta na Assistive aka n'okpuru Nkịtị moto ngalaba iji rụọ ọrụ ya.
Mgbe rụọ ọrụ "Assistive Touch", ị ga-melite atọ ụdị mmegharị n'ihi na otu onye nke abụọ, atọ na isii sekọnd. N'ihi na nzi ogbugbu mkpa ka ị na-emetụ otu oge na-azọpụta ya dị ka "ngwa ngwa". N'ihi na 1 abụọ aka, nanị emetụ ekwentị gị ma na-abịaru a gburugburu gburugburu ekwentị. Echefukwala zọpụta ya dị ka "1 abụọ". N'ihi na isii abụọ na otu onye, ​​dị nnọọ emetụ ekwentị ma jide on ruo mgbe mmanya na-eju. Zọpụta aka eso otu ụzọ. Ugbu a, i nwere ike ịmalite agbapụ. The Act ga-gbaa gị idaha ke atọ etiti oge nke ị ga-họrọ na ọbụna ha sonyere ha mgbe e mesịrị na-enweghị i na-enwe na-emetụ onye ọ bụla oge iji tipịasịa ma maliteghachi idaha. Ọ bụ oké usoro iji ọ bụrụ na ị na-agbapụ a video nke na-achọ ịkwụsị ngagharị. Lee video n'okpuru iji nweta foto a.
Filming mgbe ị na a ihu:
Hey, adịghị freak pụta! Adịghị m agwa gị ka ị n'ụzọ nkịtị ịga na nsọtụ nke a ụlọ na ihe nkiri onwe gị. M ebe a dị nnọọ na-akụziri unu ụzọ gbaa a video nke ga-duhie ndị ọzọ n'ime ikwere na ị na-arịgo a ugwu ma ọ bụ nghọta si a ihu. Dị nnọọ egosiputa mmadụ abụọ na ụzọ, otu grabbing ụzọ otu aka na grabbing a onye na ndị ọzọ. Ugbu a na-amalite-agbapụ. Akpa na-gị igwefoto vetikal mgbe Ndekọ na mgbe ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-atụgharị ya n'ime kehoraizin ntụziaka. Na oh yeah, na-etinye ụfọdụ ihe na okwu na gị ihu na ị na-eme. Lee a video maka inspirations.
Anyị na-esonụ atọ na Vine-achọ ka ị na-a bit tricky. Ọ bụghị kwa ike gbaa ma ọ na-achọ igwefoto gbaa na obere loops. Mgbe ekere mmetụta mgbe ị na-akpali kwupụta ihe na mgbe ị na-agbalị na-emetụ ya ihe na-apụ n'anya? Ọfọn, anyị na-aga na-eme ka ihe dum ihe ifu anyị video. Otu oge ọ bụ na okpokolo agba na ndị ọzọ ọ na-apụ n'anya n'ime mkpa ikuku. N'ihi na, họrọ abụọ usoro na ị na-aga gbaa. Ị kwesịrị ị na họrọ otu usoro na ihe anya na etiti (ọkacha mma ka) na ị na-akpụ akpụ. Gbaa atọ sekọnd na mgbe ahụ-azọpụta ya. Gbaa nke abụọ usoro na-enweghị ihe (a usoro kwesịrị mkpumkpu karịa onye mbụ). Ugbu a ịzọpụta abụọ na otu onye dị ka mma. Mgbe ahụ, dezie ma sonyere abụọ loops nke 4 na 2 sekọnd karị ka nwere ndị na zuru ezu video. A ezi ihe nlereanya bụ video n'okpuru:
Gwa m, olee otú ọtụtụ n'ime ị chọrọ na-atọrọ site ọbịa na-aga ịhụ ụwa ha? Ọfọn, ọ bụrụ na ị chọrọ maka ihe dị otú ahụ na-eme, ugbu a, gị chọrọ ga-emezu. Ọfọn, ke Vine video anyị ga-enyere gị aka ike bụ. Akpa ọnọdụ mgbe na-eke osisi vaịn bụ na ị chọrọ iji nweta okike. Ọ bụrụ na ị na-eche na mberede a saucer ga-abịa mee ka ị na-onye mbịarambịa ụwa, teta, ọ dịghị aga-eme. Ma ka o yie otú ị chọrọ na-atụgharị gị ụlọ na-saidwees. Atụgharị gị ngwá ụlọ na-ndina nke gị saidwees nke mere na ha na-stacked megide mgbidi na ọ bụghị na ala. Ugbu a, ị ga-mkpa "Biko, ruwe na-ehi ụra" na dị nnọọ eme na a na-sucked elu mgbe ị na-eje ije dị nnọọ pụọ gị bed. Gbaa dum ihe na gị iPhone na ị na-ọlaedo! Lee video n'okpuru ka nwere ụfọdụ echiche.
Ò nwetụla mgbe ị na-ele ndị mmadụ na-agwa onwe ha mgbe ha na-eche ihu enyo? Olee otú ị na-eme mgbe echiche na n'enyo ma ọ bụ isi agwa eme dị iche iche karịa ndị ọzọ? Otu ihe na-aga ime gị. Ná nkebi a ị ga-amụta otú gbaa echiche gị nke na-eme dị iche iche ihe karịa gị mbụ onwe on video. N'ihi na, ị ga-mkpa gbaa abụọ videos iche iche. Ha abụọ bụ ndị 100% n'ezie. N'ihi na nke mbụ video, na-esi gị igwefoto (a mgbe video igwefoto) na n'akuku-eche ihu mirror. -Eme ihe omume nke gị mirror ga emepụtaghachi. Gbanyụọ igwefoto na mgbe ahụ, ọzọ gbaa a dị iche iche edinam.
Mgbe égbè, na-eji Adobe mgbe-mmetụta software na-abụọ mkpachị ọnụ. Labeelu na dị ka mirror na onye nke ọzọ dị ka ndị na-abụghị mirror clip. Na-mirror clip n'elu ma ndị na-abụghị mirror clip na ala. Mepụta a nkpuchi gburugburu mirror clip ikewapụ ya site na isi otu. Mgbe ahụ-atụgharị abụọ mkpachị na na mmekọrịta ha. Ị ga-achọ na-atụgharị audio apụ n'ihi na onye ọ bụla n'ime ndị mkpachị-eme ka ọ ada ezigbo na-erughị eru unyi. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ijere abụọ videos na-ebipụta ha na osisi vaịn. Ebe a bụ ihe atụ:
Olee Otú Ị Pụrụ Embed Vine Videos Gị weebụsaịtị
> Resource> Video> Top 5 Vine Special mmetụta na Olee otú iji tinye ha Vine Video